Hena Lany Andro Aroson’ny McDonald, KFC Sy Ireo Sakafo Tselatra Ao Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jolay 2014 3:51 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, 日本語, Esperanto , English
Starbucks iray ao Beijing. Sary an'i byLorena, mpampiasa Flickr. CC BY-NC-SA 2.0
Ao anatin'ny tantara ratsy iray farany momba ny resaka fahazoana antoka ara-tsakafo manerana ny firenena, izay manàmbana ny hampisavoritaka ireo orinasa mpamatsy ny mpivarotra sakafo tselatra manerana an'i Shina, voataritarika anaty fotaka ny lazan'ireo marika lehibe iraisampirenena toy ny Starbucks sy Burger King taorian'ny nahitàna fa mamatsy azy hena lany andro ny amin'ny iray amin'ireo mpamatsy azy.
Voampanga ny Husi Food ao Shanghai, zana-tsampan'ny vondrona OSI avy any Illinois, ho mamerina anaty fonosana ireo hena akoho sy omby, sy sakafo hafa miharo hena efa simba mba hamatsiana an'ireo mpivarotra sakafo tselatra toy ny KFC, McDonald's sy Pizza Hut ao Shina.
Nahazo vàhana teny anivon'ny media Shinoa ilay ampamoaka, izay vokatry ny fanadihadiana an-tsokosoko nataon'ny Dragon TV tao Shanghai, ka nanery ny McDonald's sy KFC hiala tsiny tamin'ireo mpanjifany. Taorian'ny nahavaky bantsilana ilay endrikendrika dia nanambara ireo toeram-pivarotana roa lehibe ireo sy ny Pizza Hut fa miomana ny hanàla ireo vokatra voakasik'izany tsy ho ao anatin'ny sakafo arosony.
Tamin'ny Talata, niteny ny Starbucks hoe nivarotra vokatra misy hena akoho novatsian'ny Husi ny sasany tamin'ireo toeram-pivarotany, ary nampiany hoe efa natsahatry ny orinasany ny fivarotana sakafo mitondra ny anarana hoe “Akoho Misy Saosy Panini”. Burger King koa niteny hoe nanaisotra ireo vokatra rehetra namatsian'ny Husi azy tsy ho eny ambony talantàlany.
Ho setriny ny krizin-tsakafo farany indrindra teo, nampanantena fanadihadiana lalindalina kokoa ny Sampan-draharaham-Panjakana misahana ny Fanafody sy ny Sakafo, izay manaramaso ny resaka fahazoana antoka ara-tsakafo. Nakaton'ny manampahefana ao Shangai ny ozinina fikarakarana notantanan'ny Husi.
Tato anatin'ny taona vitsy, nolalovanà andian-tantara ratsy momba ny resaka fahazoana antoka ara-tsakafo i Shina, isan'ireny ny ronono misy poizina tamin'ny 2008 izay nahafaty zaza menava enina ary nampiditra hopitaly zazakely teo amin'ny 300.000.
Tamin'ny volana lasa, nilaza i Shina fa hametraka sazy ara-bola henjana be ho an'ireo mpandika ny lalàn'ny fahazoana antoka ara-tsakafo ary handroaka ny tompon'andraikitra ambony ao an-toerana raha mbola miverimberina ireny fandikàn-dalàna ireny. Niteny i Li Keqiang, praminisitra Shinoa, tamin'ny Martsa, fa “totohondry mavesatra” no ho entiny sy ireo mpiara-miasa aminy hiatrehana ny fandikàn-dalàna amin'ny fahazoana antoka ara-tsakafo.
Nanely tsaho momba ny mety ho fiantraikan'ilay fanadihadiana amin'i Shina i Hema Hen Wenrou tao amin'ny Sina Weibo, mitovy amin'ny Twitter :
Aleo andrasantsika ny vokatry ny fanadihadiana. Raha toa ireo nandika lalàna ka tena ho voasazy henjana tokoa, dia ho antso fanairana goavana ho amin'ny fahazoana antoka ara-tsakafo aty Shina izany.
Mpampiasa Weibo avy any atsmo-andrefan'ny faritanin'ny Guangxi no nidera ireo mpanao gazety niasa namaky bantsilana ny olan'ny fahazoana antoka ara-tsakafo :
Eo ny olan'ny tsy fahampian'ny fahatongavan-tsaina ara-tsosialy avy amin'ireo orinasa, ny tsy fahampian'ny fanaraha-mason'ny fanjakàna ihany koa. Rahoviana ny Shinoa vao hihinana sakafo azo antoka ivelan'ny tranony? Hitako ihany koa ny fandavantenan'ireo mpanao gazety, izy ireny no mason'ny fiarahamonintsika. Mipao-tsatroka azy rehetra ireny aho.
Namoaka ny fisalasalàny i Jinzi Zai Sahuan mikasika ny orinasa mpamatsy ara-tsakafo ao Shina:
Tonga saina tampoka aho, inona no antony mahatonga ny Husi hanana sakafo lany andro betsaka tahaka izao? Efa lò mihitsy aza ny sasany? Raha marina izay voalaza tamin'ny vaovao fa hoe mamatsy ireo orinasa roa mpanao sakafo tselatra izy, tsy tokony hanana tahiry betsaka amin'ny hena lany andro izany izy. Te-hanontany antsika aho raha toa ireny hena akoho sy omby ireny ka tany an-kafa no novidiany fa nokarakarain'ilay orinasa fotsiny avy eo? .